समाज Archives - Samasta Khabar
2nd June 2019 10th June 2019 avigo
काठमाडौं । ‘भारतीय शैक्षिक मेला २०१९’ आगामी जेठ अन्तिम साता राजधानीमा आयोजना हुने भएको छ । भारतका प्रतिष्ठित कलेज तथा विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गर्दै त्रिपुरेश्वरस्थित युनाइटेड वल्र्ड ट्रेड सेन्टरको चौंथो तलामा आगामी जेठ ३१ र ३२ गते (१५ र १६ जुन) उक्त शैक्षिक मेला आयोजना हुन लागेको हो । स्टडी इन इण्डिया’ भन्ने स्लोगनका साथ आयोजना हुन लागेको शैक्षिक मेलामा भारतका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय र कलेजहरुको सहभागिता रहने आयोजक पक्षले जानकारी दिएको छ । प्लस टु तथा स्नातक दिएर बसेका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरिएको एक्स्पो दुई…
समाजLeaveacomment
त्रिदिवसीय संगीतमय श्रीराम कथा वाचनमा भक्तजनको भीड
31st March 2019 31st March 2019 avigo
काठमाडौं । त्रिदिवसीय संगीतमय श्रीराम कथा वाचन कार्यक्रममा शनिबार भक्तजनको भीड ह्वात्तै बढेको छ । आराध्यदेव भगवान श्री पशुपतिनाथको प्राङ्गण, हंशमण्डपमा विश्व प्रशिद्घ मानस मर्मज्ञ श्रीराम कथा वाचक सन्तशिरोमणी आचार्य श्री सुदर्शनजी महाराजको मुखार विन्दुबाट त्रिदिवसीय संगीतमय श्रीराम कथा वाचन शुक्रबारदेखि चलिरहेको छ । कथा वाचन कार्यक्रमको शुक्रबार एक समारोहका बीच पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र कार्यक्रमका संयोजक उमेशप्रसाद सिंहले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्नुभयो । उद्घाटन गर्दै पूर्व मन्त्री निधिले विश्वमै अशान्ति र संकट व्याप्त भइरहेको बेलामा श्रीराम कथाले नेपालमा राम राज्यको स्थापना गरी शान्ति र सुशासनको लाथि…
प्रविधि दुरुपयोग : युवायुवतीमा मौलाउँदो यौन विकृती । वर्षका नेपाली लिक भिडियो काण्ड —
27th March 2019 27th March 2019 avigo
प्रविधिले फड्को मारेकोमा के मख्ख पर्नु जब त्यसको सदुपयोगको सट्टा दुरुपयोग गर्न खोजेपछि । यो वर्ष थुप्रै नेपाली जोडीहरुको यौन क्रियाकलापको भिडियो सामाजिक संजालमा भाइरल भयो । यौन गोपनियता हो । नितान्त दुई विपरीत लिंगीहरुको व्यक्तिगत प्रस्तुति हो । जब तेस्रो मान्छेले त्यो नंग्नता देख्छ तब इज्जतको धज्जी उड्छ । आफ्नो इज्जत बचाउने हरदम प्रयास त आफू बाट नै हुनुपर्दछ नि होइन र ? प्रविधिलाई उपभोग गर्न नजानी आफ्नो गोपनियता नै भंग हुने गरी जब त्यसको श्रव्यदृश्य कैद गरिन्छ र धेरैमाझ पुग्दछ । त्यसपछि आफूले भोग्ने सामाजिक जीवन निकै कठिन…
घाइतेको मृत्यु, हेलिकप्टर कुर्दाकुर्दै
25th February 2019 avigo
यो घटना गोरखा जिल्लाको हो । घाइते भएका चुमनुब्री गाउँपालिका २ स्योका ३२ वर्षीया टासीदोर्जे लामालाई उपचारका लागि अस्पताल लैजान बोलाएको हेलिकप्टर पर्खिदाँ पर्खिदैँ उनको ज्यान गएको हो । त्यहाँका एक स्थानीयका अनुसार, हेलिकप्टरको प्रक्रिया पूरा गर्दा बिहीबारको दिन बित्यो । ढिलै भएपनि आउँछ कि भन्ने आशा थियो तर आएन । शुक्रबारका दिन ७ बजे आउने कुरा थियो तर साढे ७ बज्दा उनको प्राण गयो । चुमनब्री गाउँपालिका सडक संजालमा जोडिएको छैन । गाउँबाट गाडी चढ्न पाँचदिनको बाटो हिँडेर सोती आइपुग्नुपर्छ । त्यसकारणले सिधै काठमाडौँ लैजानको लागि हेलिकप्टरको व्यवस्था गरिएको…
ट्याक्सी चालकले फिर्ता गरिदिए लाखौँको गहना
20th February 2019 avigo
ट्याक्सी चालक सिमल राईले आफ्नो ट्याक्सीभित्र यात्रुको छुटेको लाखौँको गहना प्रहरीमार्फत् फिर्ता गरेका छन् । बा २ ज २२७९ नम्बरको ट्याक्सीमा चढेकी गुल्मी वाझकटेरी ३ बस्ने २ वर्ष की बसन्ता भुषालले आफ्नो गहना ट्याक्सी छुटाईन् । र चालकले उनकी बहिनाी सोनिया भुषाललाई सामान फिर्ता गरेका हुन् । चालक सिमल राईले ट्राफिक महाशाखामा आएर आफैं सामान बुझाएको महाशाखाका एसएसपी वसन्त पन्तले जानकारी दिए । वसन्ता बुधबार बिहान अनामनगर भाटभटेनीदेखि नैकापसम्म ट्याक्सीमा गएकी थिइन् । उत्रिँदा उनको सामान ट्याक्सीमै छुटेको चालकले देखेपछि आफैले ट्राफिक महाशाखामा समान पुर्याएका थिए । ट्याक्सीमा १ थान…
पशुपति शर्माको गीतको शब्द र भाव पढ्नुहोस् । कहाँनिर त्रुटि भयो ? विरोधस्वरुप सेयर अभियान ।
17th February 2019 avigo
लुटेको देख्दा लुट्यो भन्न पनि नपाउने त्यसमाथि देशको सर्जकले । पशुपति शर्माले लुट कान्छा लुट भन्ने बोलको गीत निकाल्दा लुट्नेहरुलाई टाउको दुखाईको विषय बनेको हो । त्यसैले पक्कै पनि उनले लुट्नेहरुलाई इंकित गर्ने गरी गीत गाएका हुन् । अवश्य पनि कुनै कलाकारले देशको स्थितिको बारेमा सभ्य तरिकाले कुनै पनि सिर्जना गर्न पाउँछ । उनीमाथि गरिएको विरोध स्वरुप विभिन्न स्थानमा विरोध कार्यक्रम समेत भएको छ भने यो पोष्टलाई सबै मिली सेयर गरौँ । ताकि विरोधको आवाज बुलन्द बनोस् । पढ्नुहोस् पशुपति शर्माको गीतका शब्दहरु सब्बै ठाँउमा प्रयोग हुने शब्दहरू नै पशुपति…
युवतीका विषयमा झगडा, चक्कूले हानेर आफ्नै साथीकै हत्या
12th February 2019 avigo
गएराति सोमबार पोखरामा १४ वर्षीय किशोर सचिन सिंजालीको हत्या गर्ने एक जना पक्राउ परेका छन् । उनको हत्यामा उनकै साथी २१ वर्षिय कुमार गर्बुजा जो पर्वत घर भई पोखरा बस्ने सलंग्न रहेको अभियोगमा कास्की प्रहरीले आज मंगलबार पक्रेको हो । घटनामा संलग्न भएको आशङ्कामा दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालिएको थियो । प्रहरीले सीसीटीभी क्यामेराको सहायताले केही घण्टामै हत्यारा पत्ता लगाएको हो । सचिनको शव पोष्टमर्टमका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रहरी नायव उपरीक्षक नवीन कार्कीले जानकारी दिनुभयो । एक जना युवतीको विषयमा विवाद हुँदा सचिनले…
सरकार खेत बाँझो राख्न नदिने भन्छ, गाउँमा न जवान छोरो न त कामदार
11th February 2019 avigo
सरकारले निर्णय गर्यो खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राख्न नपाउने कानून बनाउने । तर गाउँघरमा कृषि श्रमिक नपाएर पिरोलिएका छन् । हामीलाई अवगतै रहेको कुरा हो देशमा कृषियोग्य जमिन प्रशस्तै छन् तर उत्पादनको बजारभाउ अति नै न्यून छ अर्थात् जिविकोपार्जन गरुँला भन्ने सोच्न त मुश्किलै छ । एक लक्का जवान छोरो आफ्नो खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेर परिवार पाल्ने सपना बोकेर विदेशिन्छ । देश रेमिट्यान्सले चलिरहेको छ । घर भने खाडीमा पसिना चुहाएको छोरोले । भर्खरै केही दिनअघिमात्र सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेको पाइएमा कार्बाही गर्ने कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ । आजभोलि…
आज वसन्तपञ्चमी, विद्याकी देवी सरस्वती्को आराधना गर्ने दिन, सबैमाझ सेयर गरौँ
10th February 2019 avigo
आज माघ शुक्ल पंचमी । आज विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको उपासना गर्ने दिनका रुपमा बुझिन्छ । विद्या आर्जन गर्नेहरुले यो दिन सरस्वतीको आराधना गर्छन् । आजको दिनमा बालबालिकालाई अक्षराभ्भ वा विद्यारम्भ गराउने चलन पनि छ । आजका दिन विवाह, व्रतबन्ध, गुफा राख्ने र बेलविवाह (इही) जस्ता सामाजिक तथा धार्मिक कार्य गर्न साइत हेर्नुपर्दैन भन्ने विश्वास छ। आज देशभरका सरस्वती मन्दिरमा पूजा आराधना गर्न श्रद्धालुको भीड लाग्छ। पुराणमा सरस्वतीको उत्पत्तिबारे विभिन्न कथा आउँछ। सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले आफ्नो शरीरलाई आधा गरी सरस्वतीको उत्पत्ति गरेको प्रसङ्ग प्रख्यात छ। यस्तै मुखबाट उत्पत्ति भएको अर्को प्रसङ्गअनुसार…
रबि लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलसँग मन्त्रालयले माग्यो स्पष्टीकरण
5th February 2019 avigo
निकिता पौडेल चलचित्र बिकास बोर्डकी अध्यक्ष हुन् । उनलाई अहिले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण माग गरेको छ । चौमासिक समीक्षा बैठकका लागि पौडेललाई मन्त्रालयद्धारा पत्राचार गरिएको थियो । मन्त्रालयले समेत पत्राचार गर्दा उनी बोर्डमा उपस्थित नभएको र अनुपस्थित भएको कुनै जानकारी नगराएको भन्दै उनीसँग मन्त्रालयले स्पष्टीकरण माग गरेको हो । उनी बिदा बस्दाको समयमा पनि स्वीकृतिबिना नै बिदा बस्ने गरेको बताइएको छ । सूचना तथा संचार मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ का लागि चौमासिक बैठक राखेको थियो र सो बैठकमा बिकास बोर्डकी अध्यक्ष नै अनुपस्थित भइन् । सो…